खुकुरीको भरमा ११ डाका छप्काएका गोरखा सैनिक बिष्णुको कथामा बलिउडमा फिल्म बन्ने | DNFMEDIA
विविध कार्यक्रम गरी सातौँ संविधान दिवस मनाइँदै
बिस्तारै उठ्दै छ बाढीले बगाएको मनाङ
वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आराधना गरी इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै
संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ छः प्रधानमन्त्री देउवा
संविधानअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहितः राष्ट्रपति
भरतमणि बने कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को विजेता
देउवा असफल भएः कोइराला
बराल अनेरास्ववियूको अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री देउवा निकम्मा सावित भएः डा. सुन्दरमणि दिक्षित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा ५२३ कैदीको सजाय मिनाहा
खुकुरीको भरमा ११ डाका छप्काएका गोरखा सैनिक बिष्णुको कथामा बलिउडमा फिल्म बन्ने
२०७६ असार १३ गते, शुक्रबार
भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठको जीवनीमा बलिउडमा फिल्म बन्ने भएको छ । नेपालको पर्वत जिल्लाका हाल भारतीय सेनामा कार्यरत रहेका श्रेष्ठको जीवनीमा गायक हिमेश रेशमियाले फिल्म बनाउन लागेको हुन् ।
गोर्खा सैनिक विष्णुको बायोपिक बनाउनका लागि राइट्स समेत लिइसकेका छन् । श्रेष्ठले सन् २०१० मा गरेको रेल यात्राका क्रममा खुकुरीको भरमा ११ डाकाहरुलाई छप्काएका थिए ।
सन् २०१० को सेप्टेम्बर दुई तारिखमा ३५ वर्षे गोर्खा सैनिक श्रेष्ठले एक रेलमा ठुलो चोरीबाट यात्रुलाई एक्लै जोगाएका थिए । भारतीय सेवाबाट पेन्सन भएर घर फर्केका उनी चढेको रेलमा घटना घटेको थियो । मौर्य एक्सप्रेसमा गोरखपुरबाट राँची गइरहेका थिए ।
डाकाहरुले रेल बाटोमा नै कब्जा गरेर यात्रुहरुसँग भएको पैसा, गरगहना, मोबाइललगायतका सामग्री लुट्न थाले । जब डाका श्रेष्ठ भए ठाउँ पुगे, उनी सुतिरहेका थिए ।
डाकाहरुले झक्झकाएर उठाउँदा उनी आफूसँग भएको सामग्री दिन तयार भए तर उनीसँगै बसेकी १८ वर्षे युवतीलाई डाकाहरुले बलात्कार गर्न खोजे तब उनी चुप बस्न सकेनन् । उनले आफूसँग भएको खुकुरी निकाले र डाकामाथि जाइलाग्न थाले । तीन जनाको घटना स्थलमै मारिए । अन्य आठ जना भागेका थिए ।
श्रेष्ठले टाइम्स अफ इन्डियालाई भने, ‘म एक सैनिक हुँ र देशको जनताको सुरक्षाका लागि मैले तलब खाने गर्छु । मैले डाकाहरुको मनोमानी चुप लागेर हेर्न सकिनँ । मैले आफूसँग भएको खुकुरी निकालेँ र डाकाहरुलाई आक्रमण गर्न थालेँ । मैले तीनजनालाई छप्काएँ । आठ जना उठ्नै नसक्ने गरी मुर्छित भए । त्यसपछि अन्य डाका भागे ।’
डाकासँगको झडपमा विष्णुको बायाँ हातमा चोट लाग्यो । दुई महिनाको उपचारपछि उक्त घाउ निको भयो । पुलिसले डाकाहरुलाई समात्न सफल भयो । उनीहरुबाट चार लाख नगद, सुनका गहना, मोबाइल फोन, ल्यापटप र अन्य सामग्री बरामद गरियो ।
उनी त्यस घटनापछि उनको भारतभर प्रसंशा भयो । सेवा अवधि सकिएर फर्किएका उनको बढुवा गरियो । उनलाई ५० हजार नगदसहित दुई पदकले सम्मान गरे । अहिले उनी भारतीय सेनामै कार्यरत छन् ।
Previous: गृह मन्त्रालयका सह- सचिवको गाडीलाई कारवाही गरेका ट्राफिक प्रहरी सम्मानित !
Next: बिकासे बजेटमा राजनिती गर्न हुँदैन :सांसद खत्री
२०७८ आश्विन ३ गते, आईतवार
२०७८ आश्विन २ गते, शनिबार